fitiavana tsy misy ahiahy
Date: 31 mai 2017 - 15:51
Inona kay no hatao mba hatsapan'ilay lhl fa tena tia azy @fo madio ary tsy misy interet fa tena hoe vrai fitiavana no hiarahana aminy?
zaho dia vhv efa manambady ary somary misy elanelantaona eo aminay 2.ny olona manodidina milaza fa hoe tsy fitiavana no hiarahako aminy.indraindray aho manahy hoe sao dia mba izany koa aza ny fandraisan'ny vadiko azy.fa manafina ftsn ohatra.izaho anefa tena tsoriko fa tena tia azy @fo madio tsy misy resaka vola na tarehy sy ny zvt ohatr'izany fa tena hoe fitiavana madio.
Tiko ho tsapany ny fitiavako azy na dia misy aza zan elanelana aminay 2 zan.
Tiko ho tsapany hoe tena sincere nge zah miaraka aminy.
Mbola tsy nisy olana mts aloha taminay 2 atreto fa ny hatahorako ftsn hoe sao dia zan vavam-bahoaka zan no hankaleo azy indray andro any.
Mba toroy hevitra ry reto fa mijaly @asa saina a!
Re: fitiavana tsy misy ahiahy
Date: 31 mai 2017 - 21:03
rehefa matoky tena sy matoky fitiavana enao dia tsy misy mahasimba an'izany, aza mihaino resak'olona fa ny fiainanareo atao izay mety, tsy misy tokony hatahoranao raha tsy misy zavatra miafina
Ny fomba hitondranao ny vadinao sy fomba hitondranao ny tonkantranonareo dia efa porofompitiavana izany, mbola tsy nisy olana ka inona no hitadiavana olana?
Date: 31 mai 2017 - 21:07
Ny fihetsikao andavanandro dia afaka ampisehoanao hoe tia azy amin'ny fo madio ianao. Aza diso mihaino vavan'olona loatra. Tsy dia olana loatra le elanelan-taona eo amin'ny mpivady raha tena mifankatia izy ireo. 10 taona ny elanelana misy eo amin'ny ray aman-dreniko. feno 40 taona tamin'ity taona ity ny mariagen'izy ireo. Fa hatrizay natsiarovako saina ka hatramin'izao izaho lasa nanambady izao, tsy mbola nahita azy mivady nifamaly sy niady tato an-trano aho. Disadisa ve mo tsy hisy tamin'izy ireo fa dia tsy nasehony anay mihitsy izany! Ary mandrak'ity ny androany dia mbola mifampitantana izy ireo eny an-dalàna ary tsapanay zanaka aman-jafiny fa tena mbola mifankatia izy ireo.
Date: 01 juin 2017 - 06:23
zao no porofo raha te hanaporofo aminy enao, sady tonga dia hotsapany tsara:
Aza maka vola na inona na inona aminy mihitsy, miezaha enao mahavita mi-payé ny tenanao. Rehefa tsy mety izy fa te hanome foana dia lazao azy ary atokano hoe antsika io, dia matetika hividiano zavatra hoazy ilay vola. Rehefa mandanindany vola na aminao na aminy ihany izy dia mba bedeso kely na manaova remarque.
Raha tena hanaporofo mx enao dia rehefa vitanao mi-paye ny tenanao dia mba hividiano zvt avy @ volanao izy.
Date: 05 juin 2017 - 11:39
porofo iray monja dia mangina ny vavan'ny olona, aza asiana resabola mihitsy mandritran'ny fotoana maromaro hiarahanareo, na hividy trano aza ohatra dia hajanony aloha, raha misy projet en valeur dia aza atao koa fa aleo miandry, vadinao mbola tsy antitra be ho faty rahapitso ka hihazakazaka hanao trano sy hividy auto sy hanao projet isankarazany maimaika eo, aza manao projet mihitsy aloha fa aleo miandry
raha tsy misy zavabaovao hitan'ny olona ety ivelany mantsy, dia mangina ho azy ny vavan'ny mpitazana, aza asiana fiovana be koa fa tohizo amin'izao ny fiainanareo, hangony ao foana aloha ny vola fa aza maimaika
Date: 05 juin 2017 - 16:18
Ary tsy mahatoky ilay olona hiarahanao akory anie ianao izany e????!!!
sao dia tonga dia misaraka dieny izao
Date: 05 juin 2017 - 18:50
porofo inona no tadiavinao, nareo angaha naka porofo koa vao nivady? Fitiavana dia fitiavana na misy tsy fitovizana aza, fa enao angamba tsy matoky tena matoa matahotra
Ary vadinao ve mba manaporofo koa fa tia anao, tsy izy ve no tokony hametrahana fanontaniana hoe inona no antony nanambadiany tovovavy fa tsy mba naka olona mba nitovitovy taona aminy, na hoe kely elan'elantaona?
Date: 07 juin 2017 - 09:53
firy ilay elanelan-taona no dia mampiasa saina be toizany? ny anay ary mihoatra ny 10taona
Efa mpivady ianareo ka inona no porofo mihoatra an'izany.
Ataovy zay mahasoa anareo fa ny vavan'olona tsy hangina mitsy, indrindra fa hitany oe metimety ny fiainanareo.
vadinao ve no mihaino resak'olona sa enao eh, efa mpivady nareo ka inona no porofo ankoatran'izay?